တိုင်းပေးထားသောပွဲစဉ်များအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘောလုံး Bet ,စာရင်းဇယား,ဘောလုံးခန့်မှန်း
+7/ 9584-983-763info@soccerbetshအဆိုပါot ကို။coမီတာ
•ပေါ်တွင်သင်၏မြေတပြင်လုံးဘတ်ဂျက်အလောင်းအစားမပြုပါ 1 မီးခြစ် (ကျော်ဖွင့်လျှင်ပင် 90% သေချာ). ဆုံးရှုံးမှုသေးငယ်တဲ့အခွင့်အလမ်းကအမြဲတမ်းရှိပါတယ်.
•အသုံးပြုခြင်း 2-3 ပိုကောင်းတဲ့ကိန်းများအတွက်ဘောလုံးဒိုင်
• NB! tipsters ၏အကြံပေးချက်များအသုံးပြုတဲ့အခါသင့်ရဲ့ tipster လိုက်နာရမည် (သို့မဟုတ် tipsters) အဆက်မပြတ်နှင့်မသူလုပ်သည့်အခါ tipster ပြောင်းလဲပစ်ရန် 1-2 ဆုံးရှုံးမှု. သငျသညျကွဲပြားခြားနားသော tipster ကိုရှေးခယျြခဲ့လျှင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမကောင်းတဲ့ပြေးစေရန်အလွန်ဖွယ်ရှိသည်.
•ဤညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်ယခုသင်ပိုက်ဆံအနိုင်ရ start ကြောင့်ထိုသို့ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မည်သင်၏အသက်တာကိုခံစား
•ဂရုတစိုက် Read - အထက် / အောက် , အာရှဟန်းဒီးကပ် , ဥရောပ Handicap. ဒါကညာဘက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Picks သုံးစွဲဖို့လိုအပ်
•အတွက် avoidbookmakers ရှယ်ယာကန့်သတ်ပွင့်လင်းအကောင့်ရန် 2-3 ဘောလုံးဒိုင်.
အကြှနျုပျတို့သညျကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုအာရှဟန်းဒီးကပ်အကြံပေးချက်များသည်•: Bet365, 188လောင်းကစား, 10လောင်းကစား, SBOBET, အထွတ်အထိပ်, Canbet, 12လောင်းကစား, Ladbrokes.
•အထက် / အောက်သည် 2.25 နှင့် 2.75 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပေးချက်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါ: 188လောင်းကစား, 10လောင်းကစား, SBOBET, Canbet, 12လောင်းကစား, Titanbet, Jetbull, 5Dime, Betdaq
အစဉ်အဆက်ဘောလုံးလောင်းကစားအတွက်အောင်မြင်သောခဲ့သူလူတိုင်းလက်ျာငွေစီမံခန့်ခွဲမှုတသမတ်တည်းအမြတ်အစွန်းများအတွက်လုံးဝအရေးပါကြောင်းကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်. အများအပြားကလမ်းညွှန်ချက်သင်၏အလှည့်နိုင်ရန်အတွက်လိုက်နာရနျလိုအပျအနိုင်ရရှိတဲ့သို့ရှုံး, ဒီတော့ဒီဆောင်းပါးမှာပါဂရုတစိုက်ဖတ်ပါရန်သေချာစေပါ. ဦးစားပေးလောင်းကစားမဟာဗျူဟာရွေးချယ်ခြင်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုစစ်မှန်တဲ့တည်းခိုငွေရှာသူများနှင့်အပေါငျးတို့သညျအခွားသူမြားအကြားခြားနားချက်ကိုကားအဘယ်သို့.
သင့်ရဲ့ bankroll ရွေးချယ်ခြင်း
သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာသည်သင်၏ bankroll ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, လောင်းကစားအတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းပိုက်ဆံသို့မဟုတ်ပမာဏ. သင်သာသင်ဆုံးရှုံးဖို့တတ်နိုင်ငွေအလောင်းအစားသင့်တယ်, အရှင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 500 ယူရိုကောင်းတစ်ဦးစတင် bankroll ဖြစ်ပါသည်, ဒီလုံးဝကိုသင်မှတက်ဖြစ်သင့်ပေမယ့်. ငါတို့သည်လည်းပြားချပ်ချပ်လောင်းကြေးကို အသုံးပြု. အကြံပြု, သို့မဟုတ်တိုင်းဂိမ်းအပေါ်ပိုက်ဆံ၏တူညီသောငွေပမာဏကိုအလောင်းအစား, နှင့်ဤထက် ပို. မဖြစ်သင့် 5% သင့်ရဲ့ bankroll ၏. သငျသညျအခြို့သောအပြီးသင့်ရဲ့ bankroll recalculate နိုင်ပါတယ် 15 သို့မဟုတ် 20 ကစားနည်း, ကက start ကနေသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပြီအထူးသဖြင့်လျှင်.
punters စုဆောင်းခြင်းထံမှလာနိုငျကွောငျးကြီးတွေအနိုင်ရရှိတဲ့အတူသွေးဆောင်ခံရလေ့နေစဉ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွံဉာဏျသာဆိုရင် single များအတွက်ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒီတသမတ်တည်းအမြတ်အစွန်း generate ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက. စုဆောင်းခြင်းအပေါ်လောင်းကစားသင်အလောင်းအစားစလစ်ညာဘက်ငါးပွဲထဲကလေးယောက်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်လောင်းကစားများ၏ဤအမျိုးအစားရှင်းလင်းစွာသင်တို့ငွေကိုဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေလျှင်ပင်မအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်. သို့သော်ငြားလည်း, သငျသညျခန့်မှန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်3တိုင်းထဲက5ဘောလုံးခန့်မှန်းပိုင်ခွင့်, သငျသညျရေရှည်မှာတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအကျိုးအမြတ်မရစေနိုင်ပါလိမ့်မည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေးချက်ကိုအစဉ်အမြဲဆိုရင် single အပေါ်အလောင်းအစားရန်ဖြစ်ပါသည်, ကနေလေးသာမှုအပေါ် 1.75 သို့ 2.25 ဤသူသည်သင်တို့ရေရှည်မှာအမြတ်အစွန်းရဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏ကတည်းက. သင်တစ်ဦးအနိုင်ရတဲ့ Streak ပေါ်စတင်ပါလျှင်, သငျသညျထက်ပိုအလောင်းအစားမှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ 5% သင့်ရဲ့ bankroll ၏, ဒါပေမယ့်လည်းလူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံကုန်ကျပြီဘုံအမှားဖြစ်ပါသည်, အရှင်သင်တို့သည်ရွေးယူပြီလောင်းကစားနည်းဗျူဟာကိုပြောင်းလဲဘယ်တော့မှသင့်တယ်. အနိုင်ရရှိမှုများနှင့်ဆုံးရှုံးအလင်းတန်းများဖြာပင်အများဆုံးအတွေ့အကြုံကို punters ဘို့မလွှဲမရှောင်ဖြစ်ကြပေမယ့်ဒီကိုကျော်လွှားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု your.betting.strategy မှစစ်မှန်တဲ့နေဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်.
ဈေးကွက်ထဲမှာဤမျှလောက်များစွာသော Bookmakers ရှိခြင်း၏အားသာချက်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သကဲ့သို့သင်တို့ရှိသူများအဖြစ်အများအပြားနှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်. ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သူတို့၏အထူးဆုကြေးငွေကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ကစားနည်း၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါသည်, သင်သည်လည်းစျေးကွက်အပေါ်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာအကောင်းဆုံးနေရာနိုင်ပါလိမ့်မည်နေစဉ်, အောင်မြင်သောအလောင်းအစားများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်ပြီး. တစ်ခုတည်းဂိမ်းအပေါ်အလေးသာမှတက်ပိုမိုမြင့်မားစေနိုင်တယ် 0.20 အခြားတစ်ခုထက်ဘောလုံးဒိုင်မှာ, သငျသညျအခွင့်အလမ်းများလာသောအခါဒါဘာကြောင့်သင့်ရဲ့အနိုင်ရရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးမဟုတ်. တချို့ကဘောလုံးဒိုင်စျေးကွက်အောက်တွင် / ကျော်အပေါ်ပိုကောင်းစျေးနှုန်းများပေး, အခြားသူများလမ်းဦးဆောင်လမ်းပြအနေဖြင့်ကအာရှဟန်းဒီးကပ်အလောင်းအစားမှကြွလာသောအခါ, ဒါကြောင့်သင်တို့ပိုက်ဆံယုံကြည်စိတ်ချမည် Bookmakers ရွေးချယ်ရာတွင်မတိုင်မီဒီအစစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ.
လောင်းကစားစျေးကွက်ဂိုးသွင်းဖို့နှစ်ဦးစလုံးအသင်းများကိုနှစ်ပေါင်း၏အတိတ်စုံတွဲကျော်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်. ဘာမှနှင့်ဝသကဲ့သို့, အလောင်းအစား၎င်း၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ဖက်ရှင်တွေရှိပါတယ်, စျေးကွက်ဖက်ရှင်သို့ကြွလာလျက်, ပြီးတော့ကွာကျသွားနှင့်အတူ.
အယူအဆမှခေါင်းဆောင်များထဲမှတစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့ပန်းတိုင် Galore စျေးကွက်မိတ်ဆက်သူကို Betfred ၏ခဲ့သည်. ဤသည် Betfred အားဖြင့် -selected ကြီးမားတဲ့ကူပွန်မှမိမိတို့ပွဲစဉ်ကို select ဖို့ punter ပါဝငျမယ်လို့- တစ်ခုချင်းစီကိုရှေးခယျြထားတဲ့စုဆောင်းခြင်း type ကိုလောင်းထည့်သွင်းရရှိမတိုင်မီ.
အဆိုပါအယူအဆရိုးရှင်း. သငျသညျအခြေခံအားဖြင့်သင်တို့ကိုနှစ်ဦးစလုံးအသင်းများကိုဂိမ်းထဲမှာတစ်ချိန်ချိန်ဂိုးသွင်းလိမ့်မယ်ထင်တဲ့ဂိမ်းကိုရွေးပါ. ဤသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဖြစ်နိုင်ပြီးကြောင့်မည်မျှတစ်ခုချင်းစီကိုအသင်းရမှတ်များအရေးမပါဘူး, ရုံနေသမျှကာလပတ်လုံးကတဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖွင့်အဖြစ်. အဆိုပါပွဲစဉ်၏ရလဒ်အဖြစ်မကြာမီနှစ်ဦးစလုံးအဖွဲ့များထို့နောက်စျေးကွက်အပေါ်အထဲကပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်ပန်းတိုင်တစ်ခုဂိုးသွင်းအဖြစ်အမှန်တကယ်လုံးဝဆီလျှော်သည်နှင့်. တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးအသင်းများကိုတစ်ဦးရည်မှန်းချက်ဂိုးသွင်းရန်ပျက်ကွက်လျှင်အလောင်းအစားတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားတဦးတည်းဖြစ်လာ.
သငျသညျဤကဲ့သို့သောစျေးကွက်ရှာချင်သောပထမဦးဆုံးအရာတိုက်ခိုက်စိတ်တူကိုယ်တူနေသောအဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကောငျးမှရှေ့ဆက်သွားမယ့်အဖွဲ့ကလိုအပ်ကိုသတိရပါ, ဒါပေမယ့်လည်းထူးဆန်းပွဲနိုင်စွမ်း. ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်သည်တစ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သို့မဟုတ်ဘာစီလိုနာကဲ့သို့ပုပိုကြီးအဖွဲ့များအပေါ်အလောင်းအစားဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့်မအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ, သူတို့ဖွယ်ရှိအတိုက်အခံများ၏အများစုဆန့်ကျင်ဂိုးသွင်းသွားထက်ပိုနေတုန်း, သူတို့တစ်ခုခုအများအပြားဂိုးသွားကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအသင်းများဖြစ်ကြသည်. တကယ်တော့, တစ်ဖက်ပေါ်တွင်သင်ဖွယ်ရှိစင်ကြယ်သောစာရွက်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရုန်းကန်သွားပေမယ့်ထူးဆန်းရည်မှန်းချက် nicking နိုင်စွမ်းဖြစ်ကြ၏သူလိဂ်နှင့်ပင်အောက်ခြေအနီးအောက်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းအသင်းများကိုကြည့်ရပါမည်.
လောင်းကစား၏ဤမျိုးများအတွက်တစ်ဦးမဖြစ်မနေကြိုတင်သင့်ရဲ့အလောင်းအစားအားမရမှအဖွဲ့သတင်းထွက်ရှာရန်ဖြစ်ပါသည်. ကြယ်တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးနှောင်းပိုင်းတွင်ကြံ့ခိုင်ရေးစမ်းသပ်မှုမအောင်မြင်ခဲ့ပါနဲ့သွင်းယူပြီဆိုရင် 15 အဆိုပါအဖွဲ့များထဲက 20 ရည်မှန်းချက်များကြောင့်ရာသီ, ထို့နောက်သွင်းယူတို့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုလွန်ကဲကဲကုန်ခမ်းခံရဖို့သွားကြသည်. အဖွဲ့ရဲ့အကောင်းဆုံးနောက်ခံလူနောက်ကျောဒဏ်ရာကနေပါလျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်ထို့နောက်သူကပင် ပို. သူတို့တစ်တွေပွဲမည်မဟုတ်ကြောင်းဖြစ်သွားမယ့်. ကစားသမားနှစ်ဦးစလုံးအဖွဲ့များအဘို့ကစားထားတဲ့အကောင့်သို့ယူပြီးသင်ဤစျေးကွက်အတွက်ယူအချက်အလက်များ၏အရေးအပါဆုံးအပိုငျးပိုငျးတစျခုဖွစျနိုငျ.
မကြာမီကပုံစံကိုသင်အနီးကပ်အာရုံစိုက်မှု play ချင်အခြား attribute ကဖြစ်ပါတယ်; ဒါပေမယ့်သင်တို့အဘို့အလို့ပြောဂိမ်း၏ဆုရှင်ကောက်နေမယ်လို့အဖြစ်. ကျနော်တို့ကသူတို့အမှတ်ပေးနှင့် conceding အလေ့အထများ၏ပုံစံကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်. နှစ်ဦးစလုံးအသင်းများကိုသတိရဘို့နှင့်ဤဖြစ်ပါသည်. အားနည်းကာကွယ်ရေးနှင့်ခိုင်ခံ့သောပြစ်မှုများကိုရှာဖွေ. ယေဘုယျအားဖြင့်ကနှစ်ဦးစလုံးမှာကောင်းသောဖြစ်ကြောင်းအသင်းများကိုတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲမယ့် - ကျနော်တို့ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, ထို့နောက်သူကပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေဖို့ဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးင်. သို့သော်အများဆုံးအသင်းများကိုအခြားတစ်ခုထက်မှာပိုကောင်းများမှာ. နောက်ဆုံးအမှာကြည့်လိုက်ပါ5နှစ်ဦးစလုံးအဖွဲ့များအဘို့အဂိမ်းများနှင့်ပတ်သက်ရည်မှန်းချက်များရှိကြ၏လျှင်ကြည့်ပါ. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်လာမည့်ကရိယာဤမလျှောက်ထားမီ၎င်းတို့၏အိမ်နှင့်ဝေးမှတ်တမ်းများနှစ်ဦးစလုံး၏ပုံစံကိုကြည့်ဖို့အတန်ငယ်ဒီတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်. တချို့ကအဖွဲ့များဖွယ်ရှိအိမ်မှာပိုကောင်းသို့မဟုတ်ကွာပါလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ဤယူပြီးအရေးပါသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်.
အွန်လိုင်းလောင်းကစားနှင့် In-ကစားလောင်းကစားဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေဂိမ်းကိုပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှား add နိုငျသောနည်းလမ်းကိုတော်လှန်ခြင်းကြောင့်အားကစားကနေငွေရှာဖို့တစ်ခုလုံးအသစ်အလမ်းပေးထား. သင့်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဂိမ်းတစ်ခုပန်ကာအဖြစ်သို့မဟုတ်ငွေရှာဖို့လိုလားသူတစ်ဦးကဲ့သို့ဖြစ်၏ရှိမရှိ, အလောင်းအစားရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုရှိခြင်းအကျိုးစီးပွားနှင့်သွင်းယူရည်မှန်းချက်များအပေါ်လောင်းကစား၏ဖြစ်ပါသည် (ကျော်လွန်) option ကိုဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေအဘို့ကြီးစွာသောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ပထမဦးစွာ, ဘောလုံးအားလုံးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အကြောင်းနှင့်ဤပရိတ်သတ်တွေအများစုကမြင်ချင်ဘာလဲ. တစ်ဦးကအသင်းကိုလွန်စွာကောင်းစွာကစားနိုင်ပေမယ့်သူတို့ဂိုးသွင်းမဟုတ်လျှင်, သူတို့ဂိမ်းအနိုင်ရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်. ရည်မှန်းချက်များမှာရှာဖွေနေစနစ်တကျဂိမ်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့နဲ့နောက်ဆုံးပီပီသည်အထိဂိမ်းတစ်ခုစိတ်ဝင်စားမှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ.
အလောင်းအစား၏ဤစတိုင်များအတွက် concept ကိုရိုးရှင်း
သွင်းယူရည်မှန်းချက်များအပေါ်အလောင်းအစားအပေါ်အယူအဆ (ကျော်လွန်) ရိုးရှင်းခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးကြီးတွေဘောလုံးကွင်းပန်ကာမဟုတျပါလျှင်ပင်, နားလည်ရန်လုံလောက်သောရိုးရှင်းသောက. အဘယ်အရာကိုသင်ဒီမှာပေါ်လောင်းကစားနေကြဂိမ်းထဲမှာသွင်းယူဂိုးစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်. နှစ်ဦးစလုံးအသင်းများရမှတ်စာရွက်ပေါ် get လျှင်တဦးတည်းအဖွဲ့ကရမှတ်ပန်းတိုင်၏အားလုံးသို့မဟုတ်ဒါဟာအရေးမပါဘူး. မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အားဖြင့်မန်ချက်စတာစီးတီးရှုံးခဲ့လျှင်3ပန်းတိုင် 1, အဲဒီမှာပါလိမ့်မယ်4စုစုပေါင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်. အလားတူပင်, မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နှင့်မန်ချက်စတာစီးတီး Drew လျှင် 2-2, အဲဒီမှာပါလိမ့်မယ်4ဂိမ်းထဲမှာရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်. ကစားနည်းသွင်းယူရည်မှန်းချက်များအပေါ်အလောင်းအစားအခါဂိမ်း၏အမှန်တကယ်ရလဒ်ကိုသက်ဆိုင်ရာမဟုတ်ကြောင်းသတိရရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်, ရည်မှန်းချက်များကသာအရေအတွက်ကို.
အဘယ်အရာကိုသွင်းယူရည်မှန်းချက်များအပေါ်အလောင်းအစားမှာရှာဖွေနေတဲ့အခါသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် (ကျော်လွန်) ရွေးချယ်စရာအလောင်းအစားတစ်နှစ်ခွဲအရေအတွက်ကိုန်းကျင်နှင့်သငျသညျဘောလုံးကွင်းထဲမှာဝက်တစ်ဦးရည်မှန်းချက်မရနိုငျအဖြစ် revolve လိမ့်မည်ဟုဖြစ်ပါသည်, ဤအကစားနည်းများ၏အားလုံးအနိုင်ရသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မည်ဖြစ်စေ. ဥပမာတစ်ခုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏ပမာဏ၏ပူဇော်သက္ကာကိုကစားသမားလေးသာကျော်ဖြစ်ခြင်းသွင်းယူတဲ့လောင်းကစား site ကိုလိမ့်မယ် 1.5.
သင်ဤအလောင်းအစား ယူ. ထက်ပိုရှိလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့လျှင် 1.5 ဂိမ်းထဲမှာသွင်းယူရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်, သငျသညျသွင်းယူနှစ်ခုရည်မှန်းချက်များဖြစ်ရှိထားဖို့လို. ဒါဟာထားတဲ့အသင်းရမှတ်ပန်းတိုင်အရေးပါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ဖို့အဲဒီမှာလိုအပ်ပါတယ်ပါဘူး2သွင်းယူရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်. အချို့သောရမှတ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၌ဤကစားပွဲ၏ရလဒ်ကို၏ဥပမာများဖြစ်ကြသည်:
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်0မန်ချက်စတာစီးတီး v 0. ဒီရမှတ်နှင့်အတူ,0ဂိုးသွင်းခဲ့ကြနှင့်အလောင်းအစားဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်.
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်0မန်ချက်စတာစီးတီး v 1. ဒီရမှတ်နှင့်အတူ, 1 ရည်မှန်းချက်သွင်းယူခဲ့ပြီးအလောင်းအစားဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်
မန်ချက်စတာယူနိက်တက် 1 မန်ချက်စတာစီးတီး v 1. ဒီရမှတ်နှင့်အတူ,2ဂိုးသွင်းခဲ့ကြနှင့်လောင်းကြေးအနိုင်ရနေသည်.
မဆိုအနိုင်ရတဲ့ရမှတ်လိုင်း 2-0, 2-1 သို့မဟုတ်ဖြစ်စေအသင်းအဘို့အရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မဆို သာ. ကြီးမြတ်အရေအတွက်ကတစ်ဦးအပေါ်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ် 1.5 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်လောင်းနှင့်ထံမှမည်သည့်ရမှတ်တစ်သရေကျ 1-1 အထက်သို့တစ်ဦးအပေါ်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ် 1.5 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အလောင်းအစား.
ဤသည်မှာနိယာမအတိအကျအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, မသက်ဆိုင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ခဲ့ပြီးသောအလောင်းအစားများ, အများအပြား Bookmakers ကျော်သွင်းယူပန်းတိုင်လေးသာပူဇော်ပါလိမ့်မယ် 2.5 ရည်မှန်းချက်များသို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်များကျော်သွင်းယူ 3.5 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်. သင်တို့သည်လည်း In-ကစားပြီးသားသွင်းယူရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပါပြီဘယ်မှာဂိမ်းကစားနည်းမြင့်မားတန်ဖိုးကစားနည်းကျော်သွင်းယူရည်မှန်းချက်များပေးသွားမှာပါကွောငျးတှေ့လိမျ့မညျ, ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းအတွက်အဆုံးသတ်မည် .5.
အလောင်းအစားအမျိုးအစားများဤအမြိုးမြိုးကိုမကြာခဏစျေးကွက်ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူ လာ.. ဤကိစ္စတွင်သူတို့ပြန့်ပွားအပေါ်သို့သတ်မှတ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏ပမာဏ၏ပုံစံအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်. အသုံးအများဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် 1.5, 2.5 ပင် 3.5 တစ်ခုချင်းစီကိုစျေးကွက်ကအခြားထက်ပိုစွန့်စားတက်ရာပူဇော်သက္ကာကိုနှင့်အတူ; အထွေထွေလမ်းကြောင်းသစ်လေးသာမှုကိုသင်ကျော်အလောင်းအစားမှရှာကြသည်ပိုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုတိုးမြှင့်ဖွစျလိမျ့မညျ. တစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းအတူကအမြတ်အစွန်းအကြီးမြတ်ဆုံးပမာဏကိုလိုက်လျောလိမ့်မည်ဟုဈေးကွက်ကိုရွေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်, တနည်း. အရာဂိမ်းအငြိမ့်ကသူတို့ဂိမ်းခွဲတမ်းထိမှန်ပါလိမ့်မယ်.
ဂိမ်းရွေးချယ်ရေးသံသယမရှိဘဲဤမြေတပြင်လုံးလောင်းကစားစျေးကွက်၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုအချို့ငွေပမာဏကိုကျော်ပေါ်လောင်းကစားသည့်အခါ, သငျသညျသိသာမြင့်မားတဲ့အမှတ်ပေးဖြစ်သွားကြသည်ဂိမ်းများကိုလိုခငျြ. ဒီလိုလုပ်ဖို့ A ကောင်းဆုံးလမ်းရှေ့ဆက်သွားမှာကောင်းသောဖြစ်ကြောင်းအသင်းများကိုစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ဆင်းရဲသားကာကွယ်ရေးရှိ. သတိရ, သင်အဖွဲ့များအကြားဖြန့်ဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်မလိုအပ်ပါဘူး; တစ်ဦး 8-0 အနိုင်ယူပြီးလက်ကျန်အဖြစ်နည်းတူကောင်းလှ၏ 4-4 ဂန္!
ဒီတစ် by-product အဖြစ်, အမြဲတမ်းမြင့်မားတဲ့အမှတ်ပေးဖြစ်ကြောင်းလိခ်ကိုရှာဖွေအကျိုးရှိသောဖြစ်သွားမယ့်. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလိခ်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးဆိုဒ်များတန်ချိန်နှင့်မည်မျှရည်မှန်းချက်များဂိမ်းနှုန်းသူတို့ပျမ်းမျှရှိပါတယ်. သတင်းအချက်အလက်ဒီလိုငါတို့သည်ငါတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များချကျဉ်းမြောင်းစတင်ရန်လိုအပ်အတိအကျကဘာလဲ. နည်းတူကောင်းစွာအဓိကလိခ်ကိုကြည့်မနေပါနဲ့, ဂိမ်းအချိုးနှုန်းမြင့်မားတဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုရှိလိမ့်မည်ဟုပိုမိုသေးငယ်တဲ့လူအမျိုးမျိုးကိုကြည့်. ထိုကဲ့သို့သောဂျပန်နှင့်ဟော်လန်အဖြစ်သောအရပ်တို့ကိုမနာမည်ဆိုးရာသီတစ်လျှောက်လုံးအမြင့်ဆုံးအမှတ်ပေးဂိမ်းရှိသည်နှစ်နိုင်ငံဖြစ်ကြပြီးကျိန်းသေပစ်မှတ်ထားရပါမည်.
ဘောလုံး Transfers အပေါ် Bet -5ရွှေစည်းကမ်းများ
တစ်ဦးကဘောလုံးအပြောင်းအရွှေ့တယောက်ကိုတယောက်ကလပ်ကနေပြောင်းရွှေ့ခံရမယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားများ၏မှတ်ပုံတင်ကြေးကိုရည်ညွှန်းသည်. ဤရွေ့ကားလွှဲပြောင်းများသောအားဖြင့်သာလွှဲပြောင်းပြတင်းပေါက်ကာလအတွင်းပြီးစီးစေခြင်းငှါ, နှင့်အားကစားရဲ့အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့တို့ကထူထောင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလေ့လာတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်. ဘောလုံးအပြောင်းအရွှေ့အလောင်းအစားအရပျကိုယူစေခြင်းငှါလွှဲပြောင်းအပေါ်ထားရှိကစားနည်းကိုရည်ညွှန်းသည်; အမှန်တကယ်လွှဲပြောင်းရာအရပ်ကိုကြာလျှင်နှင့်အလောင်းအစားသာအနိုင်ရလိမ့်မည်.
လွှဲပြောင်း Windows နဲ့အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့ကစည်းမျဉ်းများသိ Be
ကစားသမားများသာလွှဲပြောင်းပြတင်းပေါက်ကာလအတွင်းပြောင်းရွှေ့စေခြင်းငှါကတည်းက, လွှဲပြောင်းလောင်းကစားစိတ်ဝင်စားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလွှဲပြောင်းပြတင်းပေါက်ဖွင့်သည့်အခါခြေရာခံစောင့်ရှောက်ရန်အဘို့အကသဘာဝကျပါတယ်. ဥပမာ, လာမယ့်တဦးတည်း၏ဇန်နဝါရီလသည်အထိဖွင့်လှစ်မည်မဟုတ် 2012. တစ်ဦးဘောလုံးကလပ်ရဲ့လိဂ်၏အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့တို့ကကစားသမားလွှဲပြောင်းအပေါ်ထားရှိအဆိုပါစည်းမျဉ်းများနှင့်ကန့်သတ်လည်းသတိပြုသင့်ပါတယ်, ကွဲပြားခြားနားသောအသင်းအဖွဲ့များလွှဲပြောင်းပြီးစီးမည်သို့အပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများရှိစေခြင်းငှါကတည်းက.
အလားအလာ bettor ကစားသမားဖြစ်နိုင်သောလွှဲပြောင်းနှငျ့ပတျသကျသောကောလာဟလများခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်. ပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့လိုပေမည်ဘယ်အရာကိုကစားသမား၏နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများအပေါ်ရက်စွဲအထိစောင့်ရှောက်ရန်အသုံးပြုမှုများအတွက်ရရှိနိုင်အများအပြားကအင်တာနက်သတင်းရပ်ကွက်ရှိပါတယ်, အဘယ်အရာကိုသင်းကစားသမားလွှဲပြောင်းရန်ရှာနေစေခြင်းငှါ, နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှပိုင်ဆိုင်မှုအပြောင်းအလဲများသည်အခြားကလပ်အသင်းမှသို့မဟုတ်အခြားကလပ်ကနေပြောင်းရွှေ့ခံရကစားသမားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဖြစ်နိုင်သည်ရှိမရှိ.
ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့လောင်းကစားစိတ်ဝင်စားတစ်စုံတစ်ဦးကအသိပေးနေဖို့အတှကျအမြားဆုံးပညာရှိနည်းလမ်းတွေတစ်ခုမှာရာသီကာလအတွင်းတစ်ဦးချင်းဘောလုံးကလပ်အသင်းများနှင့်ကစားသမားများအတိုင်းလိုက်နာရန်ဖြစ်ပါသည်. ကလပ်မဆိုအထူးသဖြင့်အနေအထားများအတွက်ကစားသမားများလိုအပ်နေပါလျှင်ဤသည်အလေ့အကျင့်အဆုံးအဖြတ်အတွက်သူတို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ်အထူးသအမည်ရှိသောကစားသမားအတွက်မဆိုအကျိုးစီးပွားရှိလျှင်. ဘောလုံးလောင်းဖို့အောင်မြင်သောအားကစား bettor လွှဲပြောင်းလောင်းကစားစျေးကွက်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ကစားသမားများနှင့်ကလပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးတတ်နိုင်သမျှဗဟုသုတဖြစ်သင့်လွှဲပြောင်း.
& Odds သိ Be နှင့်လောင်းကစားလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလေ့လာပါ
ဆိုဒ်များကိုအလောင်းအစားအများအပြားအားကစားရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောဝီလျံဟေးလ်ရဲ့ဘောလုံးကွင်းအထူးအဖြစ်, ဘောလုံးလွှဲပြောင်းအပေါ်အလောင်းအစားချင်ပါတယ်တဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးကအလေးသာနှိုင်းယှဉ်ရသောမှတဆင့်, ဝေါဟာရများအလောင်းအစားသင်ယူနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အနည်းငယ်ကနဦးကစားနည်းနေရာ. တစ်ဦး bettor လွှဲပြောင်းလောင်းကစားစတင် site တစ်ခုအတူတက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့လျှင်, သူတို့ဆိုပရိုမိုးရှင်းသို့မဟုတ်ဆုကြေးငွေဆိုက်ကမ်းလှမ်းမှု၏အားသာချက်ယူအချို့သောလုပ်သင့်တယ်, ထိုကဲ့သို့သောအခမဲ့ကစားနည်းအဖြစ်. တစ်ဦး bettor သူတို့ကအတူအောင်မြင်မှုအချို့ရှိသည်ဖို့ကပိုများပါတယ်ဘောလုံးလွှဲပြောင်းအပေါ်အလောင်းအစားကိုမည်သို့၏ဖြစ်စဉ်ကိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာပြီးတာနဲ့.
ပမာဏ၏စဉ်းစားဉာဏ်ကစားပွဲအတွက် Make ကိုသင်တတ်နိုင်
လောင်းကစားဝိုင်းမဆိုမျိုးအတွက်မွေးရာပါအန္တရာယ်များတစ်ခုမှာမိမိတို့ကိုယ်ကို overextend ဖို့လောင်းကစားသမားအဘို့ဖြစ်၏. Player ကိုလွှဲပြောင်းလောင်းကစားဒီရှုထောင့်များတွင်မဆိုအခြားအမျိုးအစားထက်မခြားနားသည်. နေသမျှကာလပတ်လုံး bettor လောင်းကစားများ၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. အကြောင်းနားလည်တဲ့ဖြစ်လာအဖြစ်, တစ်လောင်းအနိုင်ရသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးများ၏အလေးသာသတိထားဖြစ်ပါသည်, ငွေကစားနည်းကိုပညာရှိပမာဏသူတို့ပြဿနာအနည်းငယ်ရှိသင့်. တစ်ဦး bettor သူတို့ဆုံးရှုံးဖို့တတ်နိုင်တာထက်ပိုပြီးကစားနည်းနှင့်လောင်းကစားမှမိမိတို့ကိုရပ်တန့်မနိုင်တဲ့အခါများသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, ဆုံးရှုံးအထူးသဖြင့်လာသောအခါ, သူတို့မကြာခဏပြဿနာများသို့ပြေးကြောင်း.
ဘောလုံးလွှဲပြောင်းအပေါ်တစ်ဦးအလောင်းအစားအားမရတဲ့အခါမှာမှတ်မိဖို့အရေးအပါဆုံးအရာတစ်ခုမှာလွှဲပြောင်းအမှန်တကယ်လွှဲပြောင်းပြတင်းပေါက်စဉ်အတွင်းရာအရပ်ကိုကြာလျှင်အလောင်းအစားသာအနိုင်ရခဲ့မည်ဖြစ်ပါသည်. နေသမျှကာလပတ်လုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်နှင့် bettor သောအရာတို့ကိုမည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသိရှိနေကြသည်အဖြစ်, သူကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုခံစားခြင်းနှင့်လည်းကမှာအောင်မြင်သောနိုင်ပါတယ်.
ပြန့်ပွားလောင်းကစားပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတိုးပွားလာလူကြိုက်များဖြစ်လာသည်နှင့်ဤကပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အလောင်းအစားအတွက် fixed လေးသာမှုထက်ကြောင်းကိုမြင်လျှင်ခဲအံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်. အထွေထွေစိတ်ကူးမသက်ဆိုင်သူယူထားတဲ့အခြမ်းများ၏အနိုင်ရတဲ့၏တူညီသောအခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့တစ် punter အဘို့ဖြစ်၏ကတည်းကလောင်းကစား၏ဤအမျိုးအစားအာရှဟန်းဒီးကပ်အလားတူအချို့သောနည်းလမ်းတွေထဲမှာတည်သည်. သင့်ရဲ့အနိုင်ရရှိတဲ့နှင့်ဆုံးရှုံးမှုသင့်ရဲ့အလောင်းအစားများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအပေါ်အခြေခံထားတယ်, သို့မဟုတ်သင်ဘယ်လောက်မှားယွင်းနေ / ညာဘက်.
ကျွန်တော်တို့ကိုပထမဦးဆုံးအသင်ဤဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးပါရစေ. တစ်ဘွတ်န်းကျင်မျှော်လင့်ခဲ့လျှင် 15 သို့မဟုတ် 16 တစ်ဦးပွဲစဉ်အတွက်ယူခံရဖို့ထောင့်, ပြန့်ပွားမှာကိုသတ်မှတ်ပါလိမ့်မည် 15-16. သငျသညျထက်ပိုပြီးယုံကြည်ပါ 16 ထောင့်ယူပါလိမ့်မည်, သငျသညျမှာ€ 10 မှတ် '' မဝယ် 'နိုငျ 16. ဤသည်အခြေခံအားဖြင့်သင်သည် 16 အပြီးတိုင်းထောင့်အဘို့အ€ 10 အနိုင်ရဆိုလိုတယ်, ဒါပေမယ့်လျှင်နည်းပါးလာထောင့်ထက် 16 ယူနေကြတယ်, သငျသညျပိုက်ဆံအတော်လေးနည်းနည်းဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်.
အဲဒီမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင် 21 အဆိုပါပွဲစဉ်များတွင်ထောင့်, သငျသညျရရှိမည် (21-16) x က€ 10 = € 50
ဒါပေမဲ့, ရှိလျှင်ရုံ 13 ထောင့်ကိုယူကြသည်, သငျသညျဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ် (16-13) x က€ 10 = € 30,
သင်တို့သည်လည်း '' ရောင်း 'နိုငျ, အရာဘွတ်သတ်မှတ်ပြန့်ပွားသည်ထက်နိမ့်ဖြစ်ရလဒ်ပေါ်တွင်အလောင်းအစားဖို့ကိုဆိုလိုတယ်. ပိုညာဘက်သင်, အဆိုပါပိုကြီးသည့်အနိုင်ရရှိတဲ့ခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်.
လူတိုင်းအကြိုက်ဆုံးကျောထောက်နောက်ခံဖြစ်ပါတယ်အခါအလေးသာ drop သကဲ့သို့, ပြန့်ပွားလည်းမသက်ဆိုင်ဘယ်လိုစျေးကွက်ရွေ့လျား၏ပြောင်းလဲနိုင်သည်နှင့်ဤ punters အတူတူဂိမ်းအပေါ်နှစ်ဦးစလုံးဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းမှတ်၏အားသာချက်ယူနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုသည်. ဤသည်ကုန်သွယ်နှင့်ဤလမ်းဟုခေါ်သည်, punters မသက်ဆိုင်ပွဲ၏ရလဒ်ကို၏ပိုက်ဆံအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျမှာအမှတ်မဝယ်ဆိုပါစို့ 11 ပြန့်ပွားရန်သတ်မှတ်ထားနေစဉ် 10-11, နှင့်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုကြောင့်, အပြောင်းအလဲများကိုပျံ့နှံ့ 14-15. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်မှာရောင်းချနိုင်ပါတယ် 14, အရာသင်တို့သည်နောက်ကိစ္စဂိမ်းထဲမှာဖြစ်ပျက်ငွေရှာကြလိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်. အဲဒီမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင် 15 ယူထောင့်, သငျသညျအနိုင်ရ (15-11)4မှာဝယ်သည်အတွက်ကြိမ်ရှယ်ယာ 11 ရုံတစျခုအချိန်ရှယ်ယာဆုံးရှုံး (15-14) မှာရောင်းဘို့ 14. ပြန့်ပွားလောင်းကစားအများစုကစား၌ပြစ်မှားမိသည်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ, သောစျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကို၏အားသာချက်ယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက. ဤသည် Betfair မှာအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ဆင်တူသည်နှင့်ကန့်နှင့်အတူသင့်ရဲ့အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်.
သငျသညျပြီးသားပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်ဟာ fixed လေးသာဘောလုံးလောင်းကစားနှင့်အတူထက်အများကြီးပိုကြီးကြောင်းမြင်ကြပြီ, ဒါပေမယ့်အလားအလာအနိုင်ရရှိတဲ့အချိန်တိုင်းကြီးမားနိုင်ပါတယ်နှင့်ဤအရာအားလုံးကိုဒါစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စေသည်ဘာလဲ. တစ်လောင်းအားမရတဲ့အခါမှာသင်အနိုင်ရသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးဖို့မတ်တပ်ရပ်ငွေဘယ်လောက်သိကြဘယ်တော့မှနှင့်ပြန့်ပွားလောင်းကစားမြင့်မားသော roller အဘို့အများအားဖြင့်သည်အဘယ်ကြောင့်ရဲ့.
ရိုးရှင်းစွာအနိုင်ရရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးအသင်းပေါ်လောင်းကစားခြင်းအားဖြင့်, သင့်ရဲ့အနိုင်ရရှိတဲ့နေပါစေအနိုင်ရအနားသတ်သည်မည်မျှကြီးမားသောအတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ပြန့်ပွားမှာအမှတ်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်, သူတို့ဂိုးသွင်းတိုင်းရည်မှန်းချက်သင်တို့အဘို့ပိုပြီးပိုက်ဆံဆိုလိုနိုင်ပါတယ်. ဤသည်ကိုလည်းစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ဖြည့်စွက်.
လူတိုင်းရှိပါတယ်, အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်, သင်ရုံအနည်းငယ်လျော့နည်းပိုက်ဆံအနိုင်ရလိမ့်အလောင်းအစားသူတို့ကဂိမ်း၏သေဆုံးနေအချိန်လေးအတွင်းညံံ့ကျောထောက်နောက်ခံပြုအဖွဲ့ကိုမွငျလြှငျအပြီးပေမယ့်ပြန့်ပွားအတွက်တူညီတဲ့မြင်ကွင်းနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏသည်ပေါ်ထွက်လွဲချော်, အရာကျိန်းသေမှာအားလုံးဘာမျှအနိုင်ရ beats. ဒါဟာဖြစ်ကောင်းပြန့်ပွားအလောင်းအစားနှင့်အတူသင်မူကား, အထွေထွေစိတ်ကူးရတစ်ချိန်ကခင်မင်သိကျွမ်းရရန်သင့်အားအချိန်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်, သင်တို့သည်နောက်ကာလ၌ပေါက်ကွဲမှုရှိခြင်းပါလိမ့်မယ်.
Value ကိုလောင်းကစားအတွက်အလောင်းအစားကမ်ဘာပျေါတှငျအသုံးအများဆုံးဝေါဟာရများတစ်ခုဖြစ်သည်ကြောင့်လည်းအမြတ်အစွန်းရရှိမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်. တစ်ဦးက value ကိုအလောင်းအစားသင်သည်အကြံပြုနှင့်သင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှအခြေအနေကိုအားသာချက်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်အနိုင်ရတဦးတည်းအဖွဲ့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုလေးသာမှုထက် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ကြသည်ယုံကြည်ရှိရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
နောက်ပိုင်းအကြိုက်ဆုံးကျောထောက်နောက်ခံအတွက်တန်ဖိုးမရှိသလောက်ရှိပါတယ်, အများဆုံး punters ကိုမဆိုစျေးနှုန်းများမှာအကြိုက်ဆုံး back ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြောင်း သိ., အဆိုပါဘောလုံးဒိုင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဲ့သို့အအသင်းများအပေါ်သိသိသာသာလေးသာမှုကိုလျှော့ချဖို့လေ့, ချယ်လ်ဆီးနှင့်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်. အသင်းများကိုပင်ထိုအမျိုးသူတို့ဆော့ကစားတိုင်းဂိမ်းအနိုင်ရမရနိုင်သည်ကိုမွငျလြှငျ, အလွန်မြင့်မားလေးသာမှုမှာသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကျောထောက်နောက်ခံအတွက်တန်ဖိုးမကြာခဏလည်းမရှိ, သင်က back up လုပ်ထားဖို့ကပိုအချက်အလက်များအထူးသဖြင့်ပါလျှင်. ထိုအခွင့်ကိုသူတို့ရဲ့ဥရောပဂိမ်းအပြီးများသောအားဖြင့်အကောင်းတစ်ဦးနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်, ကစားသမားများပင်ပန်းဖြစ်ကြပြီးတန်းဆင်း strugglers ကစားသောအခါကြီးမားသောရည်ရွယ်ချက်များမရှိကြပါဘူးသည့်အခါ.
ကောင်းမွန်သော Value ကိုကစားပွဲအတွက် Find လုပ်နည်း
အများဆုံးဘောလုံးဒိုင်လုပ်ဘုံအမှားသူတို့အဓိကအားဖြင့်ရပ်တည်မှုအတွက်အသင်းများကို '' အနေအထားအညီအလေးသာဖန်တီးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. သငျသညျရိုးရှင်းစွာသင်းကစားစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ပုံစံစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်ကောင်းသောတန်ဖိုးကိုကစားနည်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ရှိရာဤသည်ကိုလည်းဖြစ်ပါသည်. အဖွဲ့ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲရလဒ်ထက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြပါလျှင်, သူတို့န်းကျင်ကဖွင့်နှင့်အနိုင်ရတဲ့စတင်ပါလိမ့်မည်ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ, သငျသညျလုပျဆောငျဖို့လိုအပျသောအခါအဖွဲ့အပေါ်အလေးသာအများအပြားဆင်းရဲသားကိုရလဒ်များကိုပြီးနောက်အလွန်မြင့်မားပါလိမ့်မည်ကတည်းကနှင့်ဤဖြစ်ပါသည်. အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကန်-start သူတို့ရဲ့ရာသီသင်သည်အလွန်ကောင်းတဲ့အမြတ်အစွန်းရနိုင်သည့်အခါအတိအကျယခုအချိန်တွင်ခန့်မှန်း. အကဲခတ်အဆိုပါဂိမ်းသင်၏အချိန်အချို့ကိုတက်ယူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်သိသိသာသာအနိုင်ရသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ဖွယ်ရှိသည်. ဘောလုံးအပြောင်းအရွှေ့သတင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုလည်းကစားသမားမဆိုပြောင်းလဲမှုများကိုခံလျှင်နှင့်အဖွဲ့သည်ရဲ့သော့ချက်ကစားသမားရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ကြောင်းလျှင်ကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်.
ကောင်းသောတန်ဖိုးကိုကစားနည်းကိုရှာတွေ့၏နောက်ထပ်လမ်းအစောပိုင်းအပေါ်အလေးသာစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, အဖြစ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုအတွက်ပွဲစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်တွေအားလုံးကို. အဆိုပါဘောလုံးဒိုင်မီတပွဲအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရယူအဖြစ်အသေးစားလိခ်သူတို့အပေါ်မှာသင်ကအထက်လက်ကိုငါပေးမည်အဘို့ဤအထူးအရေးကြီးပါတယ်. နှစ်သင်းရဲ့အရည်အသွေးအတွက်ဆင်တူပါလျှင်, အဆိုပါလေးသာမှုတစ်ဝှမ်းရှိလိမ့်မည် 2.60 သူတို့ထဲကတစ်ခုခုပေါ်, ဒါပေမယ့်အသင်းအပေါ်အလေးသာ 1 အသင်း၏နည်းပြလျှင်အမှန်တကယ်အစာရှောင်ခြင်းကျဆင်းနေစတင်မည်2သူကြောင့်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကြောင်း သာ. အရေးကြီးသောပွဲစဉ်များအတွက်သူ၏ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့ကပုံမှန်ငြိမ်ဝပ်စွာနေလိမ့်မည်ဟုဤသို့ဖော်ပြသည်. သငျသညျလျင်မြန်စွာပြုမူခြင်းနှင့်အဖွဲ့သည်အပေါ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေအလေးသာယူရန်လိုအပ်သည့်အခါဤသူကားအ 1 သူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမရှိတော့ကတည်းက 33% (အသင်းများနှင့်သရေကျနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုအသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုရှေ့တော်၌ထိုတူညီခဲ့ကြသည်ယူဆ), ဒါပေမယ့်အခုသူတို့ကအနည်းဆုံးရှိပါတယ် 50%, သူတို့အထက်ဆိုစျေးနှုန်းမှာယူပြီးတန်ဖိုးရှိများမှာ 2.00. သင်နောက်ဆုံးဘောလုံး bettingnews နှင့်အတူ updated နေဖို့ရန်နှင့်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဖိုရမ်များစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ.
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်လောင်းကစားလက်အောက်တွင် / ကျော်အပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်လုပ်နည်း
ဘောလုံးလောင်းကစားတစ်ဦးဘောလုံးဂိမ်း၏ရလဒ်ပေါ်မှာအာမခံအောင်နေဖြင့်ဘောလုံးရလာဒ်များခန့်မှန်း၏အထွေထွေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်. ဘောလုံးလောင်းကစားအတွက်တရားဝင်မှုနှင့်ယေဘုယျလက်ခံမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖြစ်နိုင်သည်လောင်းကစားဝိုင်း၏အခြားပုံစံများထက်ပို varietal ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါအလေးသာဘွတ်၏မျက်နှာသာအတွက်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သကဲ့သို့ဘောလုံး bettors ၏ဝေစုပိုက်ဆံဆုံးရှုံး. သို့သျောလညျး, ဘောလုံးဂိမ်းအပေါ်ကောင်းတစ်ဦးဝင်ငွေအလောင်းအစားလုပ်များစွာကိုဘောလုံး bettors ရှိပါတယ်ထိုသူအချို့တို့သည်အားကစားသတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချ.
တစ်ဦးဘောလုံးကစားပွဲအနိုင်ရနိုင်စေရန်, သင်ကပိုထိရောက်ဖြစ်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုသတိပြုမိဖြစ်သင့်, သင်ကျော်သို့မဟုတ်လက်အောက်တွင်သုံးပြီးအလောင်းအစားသွားဖို့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင် ?? နည်းလမ်း. ကျွန်တော်တို့ကိုပထမဦးဆုံးဘောလုံး၏ဤနည်းလမ်းကိုပါဝငျအလောင်းအစားအဘယ်အရာကိုကြည့်ကြရအောင်. အဆိုပါကျော်နှင့်အတူသို့မဟုတ်သင်နှစ်ဦးစလုံးဘောလုံးအသင်းများစုစုပေါင်းရမှတ်ဂိမ်းရဲ့အဆုံးမှာဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သောအရာကိုအပေါ်အခြေခံပြီးသင့်ရဲ့ဘောလုံးကစားပွဲအားမရကြလိမ့်မည်အလောင်းအစားအောက်မှာ.
သငျသညျသင်တို့အားရှေ့ဦးစွာအနိုင်ရတဲ့အဖွဲ့ကအောင်နှင့်လည်းဆန့်ကျင်သင်းစေမည်မည်မျှဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ထင်မည်မျှရည်မှန်းချက်များဆုံးဖြတ်ရန်ရှိသည်မယ်လို့, မဆိုမှာအားလုံးပါလျှင်. သင်ခန့်မှန်းရာ၌ခန့်ထားပြီပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏အလုပ်လုပ်ပုံရဖို့အတူတူနှစ်ဦးစလုံးရမှတ်ပေါင်းထည့်ပါလိမ့်မယ်. အခုတော့ဘောလုံးကစားပွဲကိုကျော်ကာအောင်, သင်ကစားပွဲရမှတ်များလာစုစုပေါင်းထွက်ပေးသောကိန်းဂဏန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအလောင်းအစား, လောင်းကစားအောက်ရှိဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်မှာ မှလွဲ. အလွန်ဆင်တူသည်, သင်ဆဲအတူတကွရမှတ်ချပြီး၏တူညီသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အပြီးသင်ရလဒ်ဘောလုံးဒိုင်ဖြစ်ရလဒ်ကိုခန့်မှန်းသောအရာကိုထက်နိမ့်ပါလိမ့်မည်အလောင်းအစားမှရပါလိမ့်မယ်.
ဥပမာ, အဖွဲ့ A နှင့်အဖွဲ့ B ကိုအကြားတစ်ဦးဘောလုံးပွဲစဉ်ရှိပါလိမ့်မည်, အဆိုပါဘောလုံးဒိုင်ဂိမ်းရဲ့အဆုံးမှာအတူတူထားရေးအဖွဲ့ A နှင့် B ၏စုစုပေါင်းရမှတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်း7(အဖွဲ့တစ်ဦးက =4နဲ့အဖွဲ့ B ကို = 3), သင့်ရဲ့သုတေသနအပေါ်အခြေခံခြင်းနှင့်သင်ပွဲစဉ်တစ်ဦးအတွက်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်ဟုထင်ခွဲခြားစိတ်ဖြာ2အားလုံးမဲနှိုက် (အဖွဲ့တစ်ဦးက =2နှင့်အဖွဲ့ B ကို = 2) ကြောင်းလေးတစ်ဦးစုစုပေါင်းလိမ့်မယ်, အဆိုပါဘောလုံးဒိုင်ခန့်မှန်းသောအရာကိုထက်လျော့နည်း, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အလောင်းအစားလက်အောက်တွင်တစ်ခုထားပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအကြိုးရလဒျဟာဘောလုံးဒိုင်ရဲ့ခန့်မှန်းချက်ထက်ပိုပါလိမ့်မည်ထင်လျှင်အလောင်းအစားကျော်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ်.
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတော်တော်လွယ်ကူပါတယ် seams သော်လည်း, သင်ဆဲအချို့သောသုတေသနပြုနေတဲ့အစီရင်ခံစာစုဆောင်းရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
ဒီလိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသင်ယခင်ဂိမ်းအပေါ်အစီရင်ခံစာနှင့်စာရင်းဇယားနှင့်အတူပေးမညျဖွစျကွောငျး website တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်, ဤဆိုဒ်များများစွာသောသူတို့ထဲကအင်တာနက်နှင့်စာရေးတံ ချ. ဝေအပေါ်ရှိပါတယ်အခမဲ့သတင်းအချက်အလက်များပူဇော်. သင် data တွေကိုရယူနိုင်ကြသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် , သင်တို့အပေါ်မှာအလောင်းအစားချင်သောဘောလုံးဂိမ်းထဲမှာကစားရန်အကြောင်းကိုဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုဘောလုံးအသင်းများအပေါ်လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေအကြောင်းကိုအစုံ. သူတို့အားနှစ်သင်းမတိုင်မီနဲ့ကစားခဲ့ကြပါလျှင်အထဲကရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါနှင့်ရလဒ်ကိုကြည့်ရှု, သူတို့သည်ဤအတူတူတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးကစားအထူးသဖြင့်လျှင်အလွန်အကျိုးရှိသောဖွစျလိမျ့မညျ. သငျသညျယခုသူတို့များသောအားဖြင့်ပေါင်းစပ်စေသောရမှတ်ပျမ်းမျှရဖို့ကစားသည့်ဂိမ်းများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်, တစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းထဲမှာ.
လဲလှယ်လောင်းကစား Bookmakers တစ်အတော်လေးသစ်ကိုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဘွတ်နှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်နှစ်ဦးစလုံးလောင်းကစားများ၏ရှေးရိုးစွဲစတိုင်နှင့်အတူထက်ပိုကြီးတဲ့အမြတ်အစွန်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကတည်းကဒါဟာအွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏အနာဂတ်ဖြစ်နိုင်. ဘွတ်သာစျေးကွက်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေကစားသမားများအကြားတစ်ဦးဖျန်ဖြေအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကတည်းကဒါဟာအစကစားသမားအလောင်းအစားတစ်ခုကစားသမားအဖြစ်လူသိများသည်. လောင်းကစားဒီလို bettors ဖို့အများကြီးအားသာချက်ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ကနောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်ကျနော်တို့မှာအများကြီးလူကြိုက်များဖြစ်လာသည်အံ့ဩစရာမရှိဖြစ်ပါတယ်.
ကစားနည်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖလှယ်မှုအလောင်းအစားမှာအခြေခံအားဖြင့်ရှိပါတယ်, '' ကစားပွဲ 'နဲ့' lay '', ဤဝေါဟာရများကိုနားဖို့တော်တော်လွယ်ကူပါတယ်. သငျသညျဖြစ်စေနိုင်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုခုအပေါ်အလောင်းအစား (ပြန်.) သို့မဟုတ်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုခုဆန့်ကျင်အလောင်းအစား (ချထား). bettors တွေအများကြီးကြောင့်ပြတ်သားလေးသာမှုနှင့်အဆင့်မြင့်ကန့်သတ်၏အလောင်းအစားဖလှယ်မှုပိုနှစ်သက်သော်လည်း, ထက်ကပိုပြီးရှိရဲ့. သင်သိသင့်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာဘောလုံးဒိုင်တစ်ဦးကော်မရှင်အားသွင်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ (များသောအားဖြင့် 5%) အားလုံးအနိုင်ရရှိတဲ့အပေါ်နဲ့သင်တစ်ဦးအလောင်းအစားအားမရသောအခါတွက်ချက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်. အဆိုပါကောင်းသောအရာအများစုကိုလောင်းကစားဖလှယ်မှုတစ်လောင်းအားမရသည့်အခါရုံအမှန်တကယ်အနိုင်ရရှိတဲ့ဖေါ်ပြခြင်း၏ option ရှိသည်ဖြစ်ပါသည် (အနုတ်ပု 5% ကော်မရှင်).
ရိုးရာ Bookmakers မှစ. ဘယ်လိုလောင်းကစား Exchange များကွဲပြားခြားနားသော
လောင်းကစား၏ဤပုံစံကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ထို Bookmakers မသက်ဆိုင်ပွဲ၏ရလဒ်ကို၏ဘာမှအန္တာရာယ်မပါဘူးကတည်းက, သူတို့ပြိုင်ဘက်ထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့လောင်းကစားကန့်သတ်ခွင့်ပြုပါရန်အနေအထား၌ရှိကြ၏, အဖြစ်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားလေးသာမှု, အလယ်မှာလူကိုဖယ်ထုတ်ပစ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်. Betfair တူသောဖလှယ်မှုမှာ bettors များအတွက်ရွေးချယ်စရာအတော်လေးတွေအများကြီးရရှိနိုင်ရှိပါတယ်, Betsson နှင့် BETDAQ, ဒါပေမဲ့ငွေရှာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဒါကုန်သွယ်ဟုခေါ်သည်. တစ်ဦးကိုအာမခံအမြတ်အစွန်းများအတွက်ပွဲစဉ်များအားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှရလဒ်များအပေါ်တစ်ဦးကကုန်သည်ကစားနည်းမသက်ဆိုင်ရလဒ်၏, ဒါပေမဲ့သိသိသာသာမဟုတ်တစ်ချိန်တည်းမှာ. ကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်အမြတ်အစွန်းစေရန်အကြီးအနညျးလမျးမြား၏စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်.
Exchange များလောင်းကစားခြင်းနှင့်မည်သို့ Bet ရန်
သင်တို့အဘို့ရှာဖွေချင်ပထမဦးဆုံးအမှုအရာကလူအများကြီးအပေါ်အလောင်းအစားမည်ဂိမ်းတွေဟာ. ဤရွေ့ကားဘောလုံးလောင်းကစားအတွက်အများပြည်သူကစားနည်းဟုခေါ်ကြသည်. ဤနေရာတွင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်အစောပိုင်းဖြစ်နိုင်သမျှအတိုင်းအကြိုက်ဆုံးတွေထဲက back ရန်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့အပေါ်မှာအလေးသာဧကန်အမှန်တခါ drop လိမ့်မယ်ကတည်းကလည်းအများအပြား bettors သူတို့ကိုကျောထောက်နောက်ခံစတင်ရန်. သငျသညျမှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကျောထောက်နောက်ခံပြုကြလျှင် 1.40 နှင့် drop မှစျေးနှုန်းကိုငံ့ 1.25, သငျသညျတူညီသောအဖွဲ့ကို တင်. သင်သည်မသက်ဆိုင်ရလဒ်ကို၏အတော်လေးအချို့ပိုက်ဆံရရှိခဲ့ကြလိမ့်မည်ဟုလုပ်နေသဖြင့်နိုင်ပါတယ်. အများအားဖြင့်, သငျသညျအမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောစျေးနှုန်းမှာအသင်း back နဲ့နိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှစျေးနှုန်းမှာ တင်. ချင်. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ထိုအဖြစ်အပျက်သည်၎င်း၏စတင်ရောကျခါနီးပွီဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်လေးသာမှုအတော်လေးခန့်မှန်းရခက်အတက်အကျကတည်းကသင်ကစားပွဲစတင်သည်ရှေ့တော်၌ထိုကုန်သွယ်နာရီစုံတွဲတစ်တွဲပြီးအောင်သတိထားပါရန်ရှိသည်.
လောင်းကစားဖလှယ်မှုဂိမ်းစတင်တခါကတည်းက In-ကစားလောင်းကစားဘို့ပဲစုံလင်, အဆိုပါလေးသာမှုလျှင်မြန်စွာရွှေ့နှင့်သင်ငွေသားတိုင်းမိနစ်အနည်းငယ်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်. ဤတွင်ကျွန်တော်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုကြည့်ဖို့ပဲဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဂိမ်းစတင်သည်ခင်မှာပထမဦးဆုံးတစ်ဝက်မရှိရည်မှန်းချက်များအပေါ်အလေးသာန်းကျင်တစ်နေရာဖြစ်လိမ့်မည် 2.50 နှင့်ဂိမ်းဆက်ရေးရန်စတင်သည်တစ်ချိန်က, သူတို့ drop စတင်ပါလိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်သင်ကမှာပထမနှစ်ဝက်အတွင်းသွင်းယူခံရဖို့အဘယ်သူမျှမရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် back လျှင် 2.50 ဆယ်မိနစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်း (၏သင်တန်းပန်းတိုင်အဖွင့်ဂိုးမခံခဲ့ရပေး 10 မိနစ်များ), သငျသညျအများကြီးနိမ့်လေးသာမှုမှာအတူတူပင်စျေးကွက်ကိုတင်နိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်အရှင်သင်တစ်ဦးကောင်းတဲ့အမြတ်ရရှိမည်. ထောင့်ပေါ်လောင်းကစားသည့်အခါသင်သည်ဤစတိုင်ကိုသုံးနိုင်သည်, ရည်မှန်းချက်များနှင့်အခြားသောစျေးကွက်.
မည်သို့အောင်မြင်စွာ In-Play စ Bet ရန်
လုံးလုံးလြားလြားလောင်းကစားအချို့နည်းလမ်းဖြစ်ခြင်းဆင်တူပေမယ့်, In-ကစားလောင်းကစားတဦးတည်းလောင်းကစားဤအမျိုးအစားကနေငွေရှာစတင်ရန်လိုလားလျှင်နောက်တော်သို့လိုက်ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစုံရှိပါတယ်. အသက်ရှင်သောလောင်းကစားစျေးကွက်ကနောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအလွန်လူကြိုက်များဖြစ်လာမှုနှင့်အတူ, အဆိုပါ Bookmakers သင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းထဲမှာဘောလုံးဒိုင်ရိုက်နှက်ချင်တယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့တစ်ဦးကဒီဂိမ်းကိုရောက်စေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လာမည့် bettors တဦးခြေလှမ်းဆက်လက်တည်ရှိဖို့အပိုစောင့်ရှောက်မှုယူကြပြီ.
ဒါကအားလုံး bettors မသက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့လောင်းကစားမဟာဗျူဟာအာရုံစိုက်သင့်တယ်တစ်ခုခုနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာ toin-ကစားလောင်းကစားသက်ဆိုင်. အဆိုပါ bankroll သို့မဟုတ်သင်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုရန်စီစဉ်ပိုက်ဆံပမာဏကိုချိန်ညှိခြင်းတစ်ဦး bettor လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်တိုက်ရိုက်လောင်းကစားစျေးကွက်အားလုံးတစ်ခုတည်းကစားနည်းအကြောင်းကတည်းက, သင်အမြဲပမာဏအတူတူထားပါသင့်တယ် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 5% သင်၏စုစုပေါင်း bankroll ၏) တစ်ဦးချင်းစီကစားနည်းပေါ်မှာဤသင်ရေရှည်မှာအမြတ်အစွန်းအတွက်အမြင့်မားဆုံးအခွင့်အလမ်းတွေကိုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်.
in-ကစားလောင်းကစားကြောင့်သင်သည်လူတယောက်အားကစားသင့်ရဲ့နားလည်မှုအပေါ်အတွက်လက်ငင်းငွေချေဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏တဲ့လမ်းအတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အနိုင်ရသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်သင်သာသင်ကနီးကပ်စွာနောက်ကိုလိုက်သည့်အားကစားဖြစ်ရပ်များအပေါ်အလောင်းအစားရန်လိုအပ်ပါတယ်. သိသိသာသာ, အားကစားဖြစ်ရပ်များပေါ်တွင်သင်၏ပိုက်ဆံဖြုန်း၌သင်တို့နှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမသိရကြခြင်းမရှိအချက်လည်းမရှိ.
ဒီလောင်းကစားအမျိုးအစားအကြောင်းကိုဂရိတ်အရာသင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံအားမရမတိုင်မီဂိမ်းတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု watch နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, မကြာခဏအလောင်းအစားအနိုင်ရနှင့်ဆုံးရှုံးကြားရှိခြားနားချက်ဖြစ်သက်သေပြနိုင်သည့်. သင့်အနေဖြင့်အဖွဲ့များ '' လိုင်း-ups စစျဆေးနိုငျ, ဂိမ်းအပေါ်အလောင်းအစားမပြုမီနည်းဗျူဟာများနှင့်ကစားစတိုင်, ဒါကြောင့်သင်တို့သည်နောက်နည်းလမ်းဖြင့်ဒီအထူးကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းအပေါ်သွားတော်သင့်တယ်. သင်တို့အပေါ်မှာလောင်းကစားနေသောပွဲစဉ် TV ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မပါရှိဘူးဆိုရင်, သင်အွန်လိုင်းဘောလုံးဒိုင်တဦးကသူတို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်ကြောင့်စီးဆင်းစေ Live လိမ့်မည်ဟုနြို.
bettors In-ကစားလောင်းကစားနှင့် ပတ်သက်. နှစ်သက်သောအရာတစျခုနီးပါးတိုင်းမိနစ်ဖွင့်အသစ်ကစျေးကွက်နှင့်အတူမရေမတွက်နိုင်သောအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်းကြောင်း. ဘယ်သူမှသူတို့ရဲ့လောင်းကစားများ၏ရလဒ်ကိုအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့မှနာရီစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်စောင့်ဆိုင်းဖို့ likes, ဒါကြောင့်တိုက်ရိုက်လောင်းကစားစျေးကွက်မိနစ်အတွင်းအခြေချနေထိုင်လျက်ရှိကစားနည်းနှင့်အတူသူတွေကိုစိတ်မရှည် bettors ဘို့ပြီးပြည့်စုံ. သို့သျောလညျး, ဒီတန်ပြန်နိုငျသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်သကဲ့သို့ကောင်းစွာ, သငျသညျမှတဆင့်အမှုအရာစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲသင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုလိုက်ဖမ်းနှင့်ကစားနည်းအောင်သို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေနိုင်သည်ကတည်းက, အရာဖြစ်တဲ့ Fatal အမှားနိုင်ပါတယ်.
တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များအပေါ်အလောင်းအစားမှမစတင်မီ, ဒါကြောင့်စျေးကွက်ကိုယ်တိုင်ကနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်ကောင်းသောအရာကိုဖြစ်ကလှုံ့ဆော်ပေးပုံကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, အဆိုပါအလေးသာသာအတက်အကျကိုဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ. အလေးသာလုနီးပါးတိုင်းစက္ကန့်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်အတူ, သငျသညျအလွန်လျင်မြန်စွာပြုမူခြင်းနှင့်စဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်အလေးသာများသောအားဖြင့်ရွှေ့ဘယ်လောက် သိ. အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များအောင်သင်ပိုမိုအချိန်ကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်.
အားလုံးအဓိကအွန်လိုင်း Bookmakers တိုက်ရိုက် Stream ကဏ္ဍများနှင့်အတူထိပ်တန်းထစ် In-ကစားစျေးကွက် feature, ဒါပေမယ့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်များများ၏လွှမ်းခြုံစစ်ဆေးနေမှတပါး, သင်သည်လည်းကြိုတင်သင့်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုသူတို့ကစားသူအသစ်များအရပျ၌ရှိကြိုဆိုဆုကြေးငွေဘယ်လိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါ Bookmakers သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ကွာပေးအခမဲ့ကစားပွဲအတွက်ဒီမှာ Go.
အာရှဟန်းဒီးကပ်ပျံ့နှံ့လောင်းကစားသရုပ်ဖော်တဲ့လောင်းကစားအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်, သောလောင်းကစားဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏ရလဒ်ကိုနှင့်လစာထုတ်ရက်တွင်ပြုမိသည်အဘယ်မှာရှိအာမခံအမျိုးအစားအလောင်းအစား၏တိကျမှုအဆင့်အတန်းအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ပါတယ်, မဟုတ်ဘဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ထက်- တစ်ဦးဘောလုံးဒိုင်များကသတ်မှတ်ထားလေးသာမှုဆန့်ကျင်အလောင်းအစားတစ်ခုမျိုးဖြစ်သောအလေးသာအာမခံ, အာရှဟန်းဒီးကပ်မှသာ၎င်း၏အရှေ့ဇာစ်မြစ်များနှင့်ပြန့်ပွားလောင်းကစားဖို့အာရှဟုခေါ်သည်ဟူသောဝေါဟာရကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဘောလုံးလောင်းကစား၏လယ်ပြင်တွင် ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်.
Handicap ပုံမှန်အားဖြင့်အောက်မှာခွေးအသင်းအားပေးပြီးမှနေကြတယ်, ဒီဆုံးရှုံးဖို့ကပိုဖွယ်ရှိအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်.
ဘယ်လိုအာရှဟန်းဒီးကပ်ရိုးရာ Betting & Odds ခြားနား
ဘောလုံး, ဒါကြောင့်လည်းဟုခေါ်သည်သို့မဟုတ်ဘောလုံးအဖြစ်, တစ်ဦးကိုမဲနှိုက်တဲ့အတန်အသင့်မကြာခဏရလဒ်သည်အဘယ်မှာရှိကမ်ဘာပျေါမှာအနည်းငယ်အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်. သမားရိုးကျ fixed လေးသာမှုနှင့်အတူ, ဆက်ဆံရေးဂိမ်းတစ်ခုအပိုဆောင်းရလဒ်ကိုအဖြစ်ကုသနေကြ. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သငျသညျအနိုင်ရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အပေါ်အလောင်းအစားနဲ့ဂိမ်းရေးဆွဲရန်ကြွလာလျှင်, သင်ရှုံးသည်. အာရှ Handicap နှင့်အတူ, သို့သော်, သူတို့တစ်တွေဆုရှင်ထုတ်လုပ်ရန်အတင်းအကျပ်နှင့်အပြုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီတစ်ဦးရှိပါတယ်နေကြသည်အဖြစ်ဆွဲယူသို့မဟုတ်ဂိမ်းကိုကြိုးနဲ့တုတ်မျှရှိလိမ့်မည် 50 အနိုင်ရတဲ့နှင့်ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦး bettor သည်အတိုင်းပြုပါ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုအခွင့်အလမ်း.
အနှစ်သာရအတွက်အရှုံးသမားတစ်ဦးပွိုင့်တဲ့အစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူဂိမ်းစတင်မည်, ရဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့, မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဒါကောင်းစွာကျွမ်းကျင်သို့မဟုတ်လူသိများမဟုတ်သောအဖွဲ့ဆန့်ကျင်ကစားခဲ့သည်, နှင့်အဖွဲ့သည်တစ်ဦး Handicap ပေးထားခဲ့သည်ဟုပြောပေးနိုင်ပါတယ် .5 ရည်မှန်းချက်. Man U ရမှတ်များလျှင်အဆိုပါပွဲစဉ်များအတွက်စတင်ရမှတ်အခုတော့ Man U = သုညနဲ့အရှုံးသမားအဖွဲ့သည် = .5 ပါလိမ့်မယ်2တစ်ခုလုံးကိုဂိမ်းနှင့်အရှုံးသမားအသင်းများအတွက်ရည်မှန်းချက်များလည်းနှစ်ခုရည်မှန်းချက်များဂိုးသွင်းဖို့ဖြစ်ပျက်, ကြောင်းပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးလည်စည်းသို့မဟုတ်မဲနှိုက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အောက်မှာခွေးအဖွဲ့အဖြစ်မြင်နေပြီးသားနဲ့စတင်ခဲ့ .5 နိုင်ပြီ, သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးရမှတ်လိမ့်မယ် 2.5 Man U မှာတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်နေစဉ် 2. အဆိုပါအရှုံးသမားအဖွဲ့ကြောင်းပွဲအနိုင်ရခဲ့ကြလိမ့်မယ်. ထိုကွောငျ့, မည်သည့်အဖွဲ့ကပင်ထပ်မံရမှတ်စေရန်တစ်ဦးရည်မှန်းချက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဂိုးသွင်းနိုင်ပါတယ်လမ်းမရှိသောအဖြစ်တွန်းအားပေးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်, တစ်စုံတစ်ဦးကအနိုင်ရရှိသည်မယ်လို့, သို့သော်မသန်မစွမ်းစုတခုအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ.
အဆိုပါဘောလုံးဒိုင် '' ရည်မှန်းချက်ကိုမဆိုအသင်းအနိုင်ရများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေစေမည်တဲ့မသန်မစွမ်း generate ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဌာန၏အဆိုပါအာရှမသန်မစွမ်းလောင်းကစားစနစ်ကတစ်ဖြောင့်-ရှေ့ဆက်ချဉ်းကပ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ် (အဆိုပါမသန်မစွမ်းစဉ်းစားအတူ) ရန်အဖြစ်အနီးကပ် 50 တတ်နိုင်သမျှရာခိုင်နှုန်းကို. အဆိုပါအလေးသာယခုဖြစ်ကြောင်းမြင်လျှင် 50-50 ဖြစ်နိုင်ခြေ, ဘောလုံးဒိုင်တစ်ဦးပင်ထူးဆန်းအဆိုပြုဖို့နီးစပ်နိုင်ငွေပမာဏကိုဆက်ကပ်. အာရှ Handicap လေးပုံတစ်ပုံရည်မှန်းချက်မှာစတင်ဖွင့်သွားနိုင်ပါတယ် 2.5 သို့မဟုတ်ပင်3သူတို့ရဲ့အစွမ်းအစ၌အလွန်ကြီးစွာသောမညီမျှမှုနဲ့ဘောလုံးဂိမ်းအတွက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်. အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသည့်အရှုံးသမားအသင်းကအခြားအသင်းဆန့်ကျင် rated ဘယ်လိုပေါ် မူတည်. ၎င်း၏မသန်မစွမ်းရဦးမည်ဖြစ်ပါသည်, သူတို့ပင်အနိုင်ရတို့၏အခွင့်အလမ်းရစေသကဲ့သို့သူတို့ကိုပေးတော်မူလတံ့သောမသန်မစွမ်းဟာပိုကြီးရှိသည်လျော့နည်းကျွမ်းကျင်မှု. ဂိမ်းများအတွက် posted စုစုပေါင်းနှင့် တွဲဖက်. ယူ, အဆိုပါမသန်မစွမ်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဂိမ်းရဲ့နောက်ဆုံးရမှတ်ခန့်မှန်း.
SoccerBetShoot မှာ, ငါတို့သည်သင်တို့၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားအတွေ့အကြုံကိုကြောင့်ဖြစ်ရည်ရွယ်ရဲ့အတိအကျကားအဘယ်သို့ကြောင်းသေချာစေရန်ချင်တယ်: တစ်ခုပျော်စရာ, ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှင့်အလားအလာအမြတ်အစွန်းအတွေ့အကြုံကို.
နှစ်သက် တစ်ခုတည်းလောင်းကစားအကြံပေးချက်များ ပွီးပညာရှိရှိ
ဖျော်ဖြေခဲ့လျှင်မှန်ကန်စွာအလောင်းအစားပျော်စရာရှိနိုင်ပါသည်, သို့သော်, ဒါကြောင့်အလွယ်တကူအနှုတ်အတှေ့အကွုံသို့လှည့်နိုင်ပါတယ်. ကျနော်တို့ကပျင်းစရာအသံသိကြပေမယ့်လောင်းကစားစွဲများစွာသောလူထိခိုက်စေသောကြီးမားသောပြဿနာတရပ်ဖြစ်ပါသည်. SoccerBetShoot မှာကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကဏ္ဍသငျသညျအကောင်းဆုံးတစ်ဦးအပြုသဘောလောင်းကစားအတွေ့အကြုံကိုရှိသည်ဖို့တပ်ဆင်ထားကြသည်ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားအကြောင်းကိုတတ်နိုင်သမျှသတင်းအချက်အလက်နှင့်တကွသင်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏အကွံဉာဏျကအောင်မြင်မှုကသင်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင်လိမ့်မယ်သို့သော်သင်အနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုမှအာမခံလို့မရပါဘူး. ဒါဟာအပြုသဘောလောင်းကစားအတွေ့အကြုံကိုအနိုင်ရအကြောင်းကိုမဖြောင့်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်အရေးကြီးသည်သို့သော်ရှုံးနိမ့လည်းအလောင်းအစားတစ်ခုမလွှဲမရှောင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
သင့်ရဲ့အဆင့်ကိုအသိအမှတ်မပြုရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် သေချာဘောလုံးခန့်မှန်း အများအပြားလောင်းကစားဝိုင်းပြဿနာများကိုသူတို့ဖြစ်ကြသည်ထက်ပိုကောင်းများမှာစဉ်းစားလူတွေထံမှရယူထားခြင်းအဖြစ်နိုင်စွမ်း. သင်တစ်ဦးအမှန်တကယ်အတွေ့အကြုံရသို့မဟုတ်တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လောင်းကစားသမားများမှာမဟုတ်လျှင်ကျွန်တော်အလောင်းအစားသည့်အခါပိုက်ဆံဝင်ငွေသင့်ရဲ့အဓိကဦးစားပေးဖြစ်သင့်မစဉ်းစားကြဘူး. ပုံမှန် / ပေါ့ပေါ့ဂိမ်းများအတွက်, သင့်ရဲ့အဓိကဦးစားပေးပျော်စရာရှိသည်ဖို့ဖြစ်သင့်တယ်. ပိုက်ဆံအကယ်စင်စစ်ခံစားနှင့်ပိုမိုမြင့်မားသည့်လောင်းကြေးမြင့်မားသည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ဖြည့်စွက်ပေမယ့်ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစွဲ get နှင့်သင့်လောင်းကစားထိန်းချုပ်မှုထဲကရဖို့ခွင့်ပြုပါရန်လွယ်ကူသည်. သင့်ရဲ့အလောင်းအစားအကြောင်းကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်မှရိုးသား Be နှင့်သင့်လောင်းကစားအပြုအမူသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုက်ညီမှုသေချာအောင်. အခြားသူများကိုရန်သင့်လောင်းကစားအတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာသင့်ရဲ့အလောင်းအစားစောင့်ရှောက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
သတိရ: သင်ဆုံးရှုံးဖို့မတတ်နိုင်သောအရာကိုအလောင်းအစားမလုပ်သင့်. သငျသညျဂရုတစိုက်အညီသင်သည်သင်၏လောင်းကစားအပေါ်ဖြုန်းနေကြတယ်ဘယ်လောက်စောင့်ကြည့်နှင့်သင့်လောင်းကြေးညှိသေချာအောင်လုပ်ပါ. Bankroll စီမံခန့်ခွဲမှုလောင်းကစားများ၏အလွန်အရေးကြီးသောလက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်.
လောင်းကစားစှဲ, ထို့အပြင် compulsive လောင်းကစားဝိုင်းအဖြစ်လူသိများ, တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်း. လောင်းကစားဝိုင်းစှဲရောဂါသူများသည်လောင်းကစားဝိုင်းမှရှောင်ကြဉ်လို့မရပါဘူး, မသက်ဆိုင်၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးအပေါ်ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးဆက်များနှင့်မျိုးကွဲများ. Gamble ဖို့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့အနေဖြင့်၎င်းတို့၏အပြုအမူရလဒ်များကို, ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့၎င်းတို့၏အပြုအမူ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယူပြီးမပါဘဲ. တစ်ဦး၏မူးယစ်စေခြင်း “ကြီးမားသောအနိုင်ရ” အဆိုပါလောင်းကစားသမားသည်နောက်တဖန်ရရှိရန်ကြိုးစားသောအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်. compulsive လောင်းကစားသမားတွေကိုလည်းရန်သားကောင်လဲကျ “လောင်းကစားသမားရဲ့မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်အကဲဖြတ်ချက်တွေအပေါ်” သူတို့အတိတ်ဖြစ်ရပ်များအပေါ်အခြေခံပြီးအနာဂတ်မှာအခွင့်အလမ်းဖြစ်ရပ်များကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်ရသော, လောင်းကစားနှင့်အတူအနာဂတ်အောင်မြင်မှုများမှာသူတို့ရဲ့မလှူခြင်းနှင့်မှားယွင်းသော-ယုံကြည်ချက်ပိုဆိုး.
1. type တဦးတည်းလှုပ်ရှားမှု Gambler အဖြစ်ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်. လှုပ်ရှားမှု Gambler ကြောင့်၏ compulsive လောင်းကစားဝိုင်းမှရေးဆွဲနေကြ “အန္တရာယ်” ပါဝင်ပတ်သက်, ပုံမှန်အားဖြင့်အခြားသူများကိုလှည့်ပတ်လောင်းကစားဝိုင်းကြိုက်တတ်တဲ့နှင့်ကျွမ်းကျင်မှု၏ဂိမ်းများကိုပိုနှစ်သက်.
2. compulsive လောင်းကစားဝိုင်း၏ဒုတိယအမျိုးအစားတစ်ခု Escape Gambler ဖြစ်ပါသည်. ဤရွေ့ကားလောင်းကစားသမားတွေနာကျင်မှုအချို့မျိုးမှလွတ်မြောက်ရန်အလို့ငှာအလောင်းအစားမှအနိုင်အထက်နေကြတယ်, သူတို့စိုးရိမ်ပူပန်ထုံနိုင်သောနေရာ, အထီးကျန်နှင့်နာကျင်မှု.
အများဆုံးစိတ်ရောဂါလိုပဲ, တဦးတည်းရဲ့လောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူတွေသူတို့ရဲ့သာမန်နေ့က-to-နေ့ကအသက်နှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ရန်စတင်သောအခါအလောင်းကစားဝိုင်းစှဲလက္ခဏာပေါ်လာသေချာ. compulsive လောင်းကစားဝိုင်းတစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမကျန်းမဖြစ်ကတည်းက, လောင်းကစားဝိုင်းစှဲ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုတစ်ခါတစ်ရံ detect လုပ်ဖို့ကပိုခက်ခဲ. ထို့အပွငျ, အများဆုံးရောဂါကဲ့သို့အ, အဆိုပါလောင်းကစားသမား၎င်းတို့၏အပြုအမူဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်သူတို့ရဲ့ Impulses သတင်းပို့စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်, သံသယများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသက်သာစေနိုင်ကြောင်းနိုင်ရန်အတွက်. သို့သျောလညျး, compulsive လောင်းကစားဝိုင်းပြဿနာများကိုအချို့ဆိုင်းဘုတ်များပါဝင်သည်: ဝင်ငွေအပြောင်းအလဲမရှိဘဲပိုက်ဆံမရှိခြင်း, ရက်လွန်ဥပဒေကြမ်းများ, ဘဏ္ဍာရေးကျော်လျှို့ဝှက်, ခိုးယူ, အပိုသာသနာငွေသားအဘို့အမှုအရာတို့ကိုငွေချေးသို့မဟုတ်ရောင်းချနေ, အချိန်ကုန်လောင်းကစားဝိုင်းကျော်လျှို့ဝှက်, လျစ်လျူရှုထားမိသားစုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်ဝတ္တရား, အောင်ပွဲခံဖို့လောင်းကစားဝိုင်းသုံးပြီး, အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူစာချုပ်.
1. phase ငါရှိရာလောင်းကစားသမားအတွေ့အကြုံများဟာအနိုင်ရရှိမှု phase ဖြစ်ပါတယ် “ကြီးမားသောအနိုင်ရ” သောလောင်းကစားသမားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခွက်တဆယ်ဖို့သူ / သူမ၏အနိုင်ရရှိ attribute မှဖြစ်ပေါ်စေသည်, နှင့်သူတို့၏အောင်မြင်မှုဆက်လက်ကြိုးစားကြသည်.
2. phase II ကိုဘယ်မှာသူတို့ဆုံးရှုံး phase ဖြစ်ပါတယ်, ငွေအမြောက်အမြားဆုံးရှုံးခဲ့ပေမယ့်, လောင်းကစားဝိုင်းတွေနဲ့ပိုပြီးစိုးရိမ်မိဖြစ်လာဖို့နှင့်မိသားစုကိုလျစ်လျူရှုရန်စတင်, မိတ်ဆွေများက, အလုပ်နှင့်သူတို့ဆုံးရှုံးဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်.
3. အဆင့် III ကိုသူတို့လောင်းကစားဝိုင်းအလေ့အထများကျော်အားလုံးထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးရှိရာအပူတပြင်း phase ဖြစ်ပါတယ်. အစဉ်မပြတ်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံး, ပြန်သူကအနိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်, သူတို့ပြဿနာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, ဒါပေမယ့်ကိုရပ်တန့်နိုင်ခြင်းမရှိကြချေ. မကြာခဏကြိမ်, အဖြစ်မှန်သူတို့ရဲ့လျစ်လျူရှုအလုပ်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, လင်မယာကွာ, ပျက်စီးဆက်ဆံရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ရာဇဝတ်မှုကိုဒုက္ခ.
4. အဆင့် IV ဟာလောင်းကစားသမားအရာအားလုံးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါသည်ရှိရာကူကယ်ရာမဲ့ phase ဖြစ်ပါတယ်, ပင်မျှော်လင့်ချက်. သူတို့ဟာမကြာခဏသူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မူးယစ်ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်အရက်နှုနျးနှငျ့အခြို့ပင်အဖြစ်ဝေးသတ်သေသို့မဟုတ်သတ်သေကြိုးစားမှုအဖြစ်သွားရ.
သူတို့ရဲ့လောင်းကစားစွဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းသဘောတူညီမှုကိုကူညီအများအပြားနည်းလမ်းများရှိပါသည်. အားလုံးကုသမှုသို့သော်တစ်ဦးချင်းပထမဦးဆုံးသူတို့တကယ်တော့ပြဿနာတစ်ခုရှိမဝန်ခံဖို့လိုအပ်. ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောသိမှု-အပြုအမူကုထုံးနှင့်ပါဝင်မှုအဖြစ်နည်းလမ်းများကုသမှုရတဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလောင်းကစားသမားတွေကသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝတွေကိုတည်ဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေး, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေး. ကုသမှုအစီအစဉ်များအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက, အဖြစ်အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်များ, diagnoses, နှင့် Self-အကူအညီနဲ့အစီအစဉ်များ, အောက်ပါက်ဘ်ဆိုက်များကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး.
• Gambler အမည်မသိ
• compulsive လောင်းကစားအကူအညီ
compulsive လောင်းကစားဝိုင်းပြဿနာများကိုဆက်ဆံပါကကူညီရန်နောက်ထပ်အကြံပြုချက်လောင်းကစားဝိုင်း software ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် run ဖို့ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်သည့်အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်. ဒီအွန်လိုင်းလောင်းကစားတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သွေးဆောင်မှုကိုဖယ်ရှားပေးနှင့်လျှို့ဝှက်လောင်းကစားဝိုင်းမှသိသိသာသာပံ့ပိုးဖယ်ရှားပေး. သင်သည်သင်၏လောင်းကစားကြီးမားသောပြဿနာတရပ်ဖြစ်လာကြောင်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ် အကယ်. အလောင်းအစားဖို့အခွင့်အလမ်းကိုလျှော့ချကူညီဖို့အစီအစဉ်၏ဒီလိုမျိုးကို အသုံးပြု. ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်. ကျနော်တို့ Gamblock လို့ခေါ်တဲ့ software ကိုအကြံပြု.